Ny Quilotoa, vatosoa an'ny Ecuadorian Andes | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Ekoatera, General, mpitarika, Inona no ho hita, Quito
Ny Quilotoa dia volkano ao amin'ny Ecuadorian Andes ny vava volkano nanangona ilay antsoina matetika hoe farihy volkano. 3 km ny savaivony ary 250 metatra eo ho eo ny halaliny, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo farihy volkano lehibe indrindra sy mahavariana indrindra eto an-tany.
Io no volokano farany andrefana any Ekoatera ary ao amin'ny Valan-javaboary Cotopaxi. Ny loko manga turquoise manga ao anaty rano dia vokatry ny habetsaky ny mineraly ao amin'ny farihy.
Kaldera milentika izy io, ny fampangatsiahana azy ary ny lava no nahatonga azy tsy ho zaka intsony ary niforona ny farihy iray noho ny tsy fiasan'ny volkano sy ny fiangonan'ny orana, toy ny an'i Quilotoa. Ny ankamaroan'ny volkano farihy dia any amin'ny kaontinanta amerikana, any Eropa dia afaka ahitantsika azy ireo any Islandy sy Portugal.
Iray amin'ireo fitsangatsanganana manintona sy manandanja indrindra eto Ekoatera. Ny làlana rehetra mamaky ny firenena Andes dia tsy maintsy misy fitsidihana an'io fahitana natiora io.
1 Ahoana no ahatongavana any Quilotoa?
2 Inona no hatao any Quilotoa?
3 Latacunga, teboka fanombohana an'i Quilotoa
Ahoana no ahatongavana any Quilotoa?
ara-dalàna ny fomba haingana indrindra dia avy amin'ny tanànan'i Latacunga, manodidina ny 75Km (adiny 1 sy sasany an-dàlana). Azonao atao ihany koa ny miala any Ambato, sahabo ho 120Km, mamaky an'i Latacunga ary avy any an-drenivohitry ny firenena, Quito aza. Heveriko fa ny halavirana avy any Quito dia lava loatra handehanana any amin'ilay faritra nefa tsy diso ny zava-dehibe indrindra.
Hay fomba roa hahatongavana amin'ny volkano: amin'ny fiara (na miankina na masoivoho misy mpitari-dalana eo an-toerana) na amin'ny bus fitateram-bahoaka Avy amin'ny tobin'ny bus lehibe any Latacunga, amin'izao fotoana izao dia misy fiara fitateram-bahoaka 1 mivantana mandalo ny tanànan'i Zumbahua na bus isan'ora mankany amin'ity tanàna ity ary indray mandeha any taxi mankany Quilotoa.
Raha ny amiko dia nanakarama mpitari-dalana iray teo an-toerana niaraka tamina fiara avy any Latacunga aho mba hahafahako mitsidika ireo vazimba teratany ary hahafantatra ny niandohana sy ny tantaran'ny volkano sy ny kolontsain'ilay faritra.
Amin'ny fomba nitenenako azy ho an'ny volkano Cotopaxi, zava-dehibe ny fahalalana izany ho eo amin'ny 4000 metatra ny haavony isika. Raha tsy zatra izany isika dia mety marary an-doha sy marary an-tendrombohitra. Ilaina ny mampifanaraka tsindraindray ny haavon'ny firenena, fa tsy mankany mivantana amin'ny morontsiraka mankany amin'ny faritra avon'ny Andes satria mety hanimba ny fahasalamana izany.
Manoro hevitra anao ihany koa aho mba hitondra akanjo mafana, tendrombohitra na fanatanjahan-tena ary kiraro sahaza anao. Ny lalana mankany amin'ny farihy dia malama.
Ny lalana mankany Quilotoa dia mamakivaky faritra be tendrombohitra Andes izay tsara tarehy indrindra. Izy io dia faritra iray misy ny zanatany betsaka indrindra. Ny alakamisy dia tanterahina ao Saquisilí ny tsena mahaliana eo an-toerana. Ity tanàna ity dia antsasaky ny lalana mankany Quilotoa.
Fitsangatsanganana izany Azo atao amin'ny andro iray ihany manomboka amin'ny Latacunga. Na izany na tsy izany, any amin'ny faritry ny farihy sy amin'ireo tanàna mifanila aminy dia misy trano fatoriana kely ary ny governemanta Ekoatoriana dia mamela ny mitoby eo amin'ilay volkano miaraka amin'ny alalana mialoha.
Manoro hevitra anao aho mba hanao fijanonana 1 na 2 eny alohan'ny hahatongavanao amin'ny volokano mba hahitana sy hankafizanao ny zavakanto sy ny kolontsain'ny vazimba any amin'ny faritra. Tena tsara tarehy sy mahaliana ny mahita ny fomba fiainam-bahoaka.
Rehefa tonga any dia tsy maintsy mandoa vola ianao amin'ny fidirana amin'ny toeram-piantsonana sy fivarotana vazimba teratany.
Inona no hatao any Quilotoa?
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny olona iray, ny fijanonan'ny fiara dia eo an-tampon'ny volkano fa tsy eo ambany. Ny zavatra voalohany hitantsika dia ny farihy lavitra, avy ambonin'ny zavatra rehetra. Volkano io ka raha mitsidika azy ianao dia tsy maintsy midina fa tsy hiakatra.
Es iray amin'ireo sary mahavariana indrindra an'i Ekoatera: apetraho ny fiara, mandehana mankamin'ny lalamby (amin'izao fotoana izao dia tsy mahita na inona na inona ianao) ary mahita tampoka ny halehiben'ny volokano sy ny farihy. Mamela anao tsy hiteny. Tsy misy fotoana hanomezana anao fahatsapana fa aorian'ny fisidinana dia misy ilay lohasaha mankany amin'ny farihy 3 km ny sakany ary 250 metatra ny halaliny.
Raha vao tonga dia mahaliana midina amin'ny farihy. Ho an'izany dia misy làlana misy tehezan-tendrombohitra midina midina mankany amin'ny lava-bato.
Tokony ho antsasak'adiny dia vita ny dia manontolo mankany amin'ny farihy. Mila mitandrina ianao satria malama be ny gorodona. Ny fomba fiakarana dia somary mafy ary mitaky adiny iray na sasany sy sasany mba hanaovana azy, na dia eo ambany aza ianao dia afaka manakarama ny serivisy hampiarina amin'ny soavaly.
Any azonao atao jereo akaiky ny volan'ny volkano, izay na dia tsy mihetsika aza, dia mbola mamoaka entona avy any ambanin'ny farihy ihany. Afaka mandeha mora foana ianao amin'ny ampahany amin'ny moron'ny farihy.
Latacunga, teboka fanombohana an'i Quilotoa
Manoro hevitra anao ihany koa aho hitsidika ny afovoan'i Latacunga, mijanona ao amin'ity tanàna ity ary mitsangatsangana ny ampitso. Izy io dia heverina ho tanàna lehibe indrindra amin'ny "circuit Quilotoa" ary ny toerana fiaingana ho an'i Quilotoa sy ny valan-javaboary Cotopaxi. Teboka stratejika ao Andes (misy seranam-piaramanidina manan-danja aza ho an'ny firenena).
Ny tena manintona ny mponina dia izy rehetra ny fiangonana ao afovoany sy ny katedraly azy, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tsy tanàna mpizahatany izy io ary manampy amin'ny fandinihana ny fomba fiainan'ny Ekoatoriana Andes.
Tsy isalasalana fa i Quilotoa dia iray amin'ireo toerana izay tsy hohadinoinao mihitsy raha mitsidika azy ianao. Volkano midadasika sy farihy manana hatsarana hafakely. Manoro hevitra tanteraka ny fahitana ny fahitana an'io natiora io aho raha afaka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Ekoatera » Ny Quilotoa, voahangy an'ny Andes Ecuador